Izincwadi ezikhuluma ngoMagi. Ukukhethwa kwezindaba nezindaba | Izincwadi Zezindaba
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 06/01/2022 12:00 | Amabhuku
Usuku Lwamakhosi, usuku lokukhohlisa kanye nosuku lwezingane. Lena eyodwa ukukhethwa kwezindaba, izinganekwane kanye nezinganekwane mayelana noMagi, usuku nesiko eliyoqhubeka likhona.
1 Usuku lwamaKhosi. Izinganekwane zikaKhisimusi - VVAA
2 Isipho seMagi - O. Henry, Lisbeth Lisbeth Zwerger
3 Izazi Ezintathu Nentombazane Engazange Ilale - Daniel Estandía, Óscar Rull, Sara Nicolás
4 Ubusuku Beshumi Nambili - uCarmina del Río noSandra Aguilar
5 U-Olivia kanye nencwadi eya kumaMagi - u-Elvira Lindo no-Emilio Urberuaga
6 Ikamela Elincane - uGloria Fuertes noNacho Gómez
Usuku lwamaKhosi. Izinganekwane zikaKhisimusi - VVAA
Isihloko okufanele sikhumbule futhi esibonisa izindaba, izinganekwane namasiko abazali nogogo nomkhulu abasitshela wona, noma esasiphila ebuntwaneni bethu. Lokhu futhi kukhombisa ukukhula kwendaba emfushane kanye nendaba ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX. Ababhali ababaluleke njenge Becquer, Emilia Pardo Bazán, José Echegaray, Valle-Inclán o I-Azorin Babhala izindaba ezincane zikaKhisimusi lapho babethwebula khona izinkumbulo zomndeni, okuhlangenwe nakho noma ubukhali bempilo ngaleso sikhathi.
Isipho seZazi - O. Henry, Lisbeth Lisbeth Zwerger
O. Henry igama elingelona iqiniso lika UWilliam Sidney Porter, umlobi waseMelika wangekhulunyaka le-XNUMX owayephila impilo ematasatasa. Ubeyintatheli kanye nomthengisi wasebhange phakathi kweminye imisebenzi, futhi wachitha iminyaka embalwa ejele esolwa ngokweba lapho esebenza khona. Lapho waqala ukubhala izindaba ezimfishane, ubulili obubhekwayo isandulela, noPoe noma uMark Twain.
Lapha exoxa indaba ka U-Della noJim, umbhangqwana othandanayo ofuna ukuphana isipho ngoKhisimusi. Kodwa kuyodingeka bathengise okuthile okuyigugu kubo ukuze bathenge isipho esifunwa omunye. Kuboniswa ngu-Lisbeth Zwerger, umbhali wase-Austrian owazalelwa eVienna ngo-1954 okwathi ngo-1990 wawina uMklomelo Wamazwe Ngamazwe we-Hans Christian Andersen.
Okwabafundi be Iminyaka engu-6 nangaphezulu.
Izazi ezintathu kanye nentombazane engalali - UDaniel Estandía, u-Óscar Rull, uSara Nicolás
Lena incwadi ejabulisayo yobusuku obuyimilingo kakhulu bonyaka nayo ngezifiso kuze kufike kuma-protagonist amathathu. Futhi kungukuthi konke kufanele kulungiselelwe ukuze ubusuku baMakhosi bube yimpumelelo: kufanele uthumele izincwadi ngesikhathi, ushiye izicathulo ezibonakalayo, unikeze okuthile okudliwayo kubavakashi futhi, ngaphezu kwakho konke, ulale ekuseni. Kodwa yini engenzeka uma intombazane isuke igxile ekufundeni ize ikhohlwe nokulala? Nokho, uMelchior, uGaspar no-Baltasar kuzofanele basebenzise bonke ubuhlakani babo ukuze benze u-Berta alale futhi ekugcineni akwazi ukushiya izipho zingakaziwa. Umbuzo uthi bazophumelela yini.
Ubusuku Beshumi Nambili - uCarmina del Río noSandra Aguilar
Incwadi ebhalwe ngevesi lokho kulandisa lokho uJuan akuzwayo phakathi nangemuva kobusuku beshumi nambili. Indaba emnandi egcwele umculo ngenhloso yokuthi izingane ziqonde imininingwane eyengeziwe ngalobu busuku bomlingo.
U-Olivia kanye nencwadi eya kumaMagi - u-Elvira Lindo no-Emilio Urberuaga
Umlingiswa oyinhloko wale ndaba ngu Olivia, okuyingxenye yeqoqo legama elifanayo, elibhalwe ngu-Elvira Lindo, elihloselwe abafundi abaphakathi kweminyaka emithathu kuya kweyisithupha ubudala. Kulokhu u-Olivia ucabanga kanjalo kunzima kakhulu ukubhala incwadi eya kumaMagi. Ngakho ucela usizo kumkhulu wakhe, amchazele ukuthi wakwenza kanjani esemncane nokuthi wabuzwa ngani.
Ikamela elincane - UGloria Fuertes noNacho Gómez
Konke uGloria Fuertes akubhalela izingane kwaba impumelelo yangempela, ngenxa yobusha bevesi layo, ulimi lwayo nesigqi salo. Kule ndaba usiyisa kukhisimusi kanye amadoda ahlakaniphile abazovakashela uMntwana bephelezelwa ikamela elikhetheke kakhulu. Okwabafundi abancane kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Izincwadi ezikhuluma ngoMagi. Ukukhethwa kwezindaba nezindaba